ပို့ပါ 10 နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသို့ဒီဇယ်ပုလဲပြောင်းခြွေလှေ့စက်ကိုတပ်ဆင်သည်
2019 အစတွင်, Victor လယ်ယာစက်ယန္တရားပေးပို့ခဲ့သည် 10 ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်ထားသောပုလဲဆန်စက်စက်ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားသို့သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤဖောက်သည်သည် Gombe Strte တွင်တည်ရှိသည် ,Nigeria.the အဓိကစပါးကိုပုလဲပြောင်းဆန်ရှိပါတယ်, နှံစားပြောင်းနှင့်ပြောင်းဖူး,သူကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကိုသွားတယ်,သူဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် 10 ပြောင်းဆန်မှုန့်ကြိတ်စက်ကိုတပ်ဆင်သည်။ ,ဒါပေမယ့်လည်းနှံနှံခြွေလှေ့များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ,ပြောင်းဖူးအခွံနှင့်ကောက်နယ်တလင်း,စပါးခြွေလှေ့.
Millet သည်အခြားနိုင်ငံများရှိခြောက်သွေ့သောဒေသများတွင်နေထိုင်သောလူများအတွက်အရေးကြီးသောအစားအစာဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းအာဖရိကတွင်ဖြစ်သည်, နှင့်အာဖရိကအနောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံများတွင်. စားနပ်ရိက္ခာအနေဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ပြောင်းဆန်များစားသုံးခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးအနောက်အာဖရိကတွင်စားသုံးမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။, မာလီနှင့်ဆီနီဂေါ၌တည်၏, millet အကြမ်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်း 40 စုစုပေါင်းသီးနှံအစားအစာစားသုံးမှုရာခိုင်နှုန်း , နိုင်ဂျာနှင့်မိုးနည်းရေရှားနမီးဘီးယားတွင်ရှိနေစဉ်၎င်းမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့သည် 65 ရာခိုင်နှုန်း. millet အကြောင်းကိုအကောင့်ခန့်မှန်းထားသည် 35 Burkina Faso ရှိစုစုပေါင်းသီးနှံစားသုံးမှု၏ရာခိုင်နှုန်း, ချတ်နှင့်ဂမ်ဘီယာ။ ပြောင်းဆန်သည်သိသာသောအစားအစာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောအာဖရိကရှိအခြားနိုင်ငံများမှာအီသီယိုးပီးယားဖြစ်သည်, နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ယူဂန်ဒါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပြောင်းဆန်ခြွေလှေ့စက်ကိုဝယ်ယူသည်, သူ၏လယ်၌လယ်လုပ်ခြင်း၊. ထိုကဲ့သို့သောလက်မှုန့်ကြိတ်ခြင်းသည်အလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းနှင့်အချိန်ကုန်စေသည်, သူ၏လယ်ယာမြေတွင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားလေးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုယူပြီးသူသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေသည် ,သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်နေသောဗဟုသုတများစွာရှိသောစပါးနယ်လှည့်စက်၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် ,ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးငါတို့စက်ရုံကိုသွားတယ် ,ထို့နောက်မှာယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ 10 စပါးနယ်လှည့်စက်ကိုသတ်မှတ်.
ဘက်စုံသုံးစပါးနယ်လှည့်စက်ကိုမျိုးများစွာကြိတ်ရန်အသုံးပြုသည်, ထိုကဲ့သို့သော millet အဖြစ်, ငရုတ်သီးစိမ်း,ပြောင်းဖူး, ပဲမျိုးစုံ, ဂျုံ , ပဲပုပ်, စပါးနှင့် oat,buckwheat so on.Grain ခြွေလှေ့စက်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနဌာနများအတွက်စံပြစက်ဖြစ်ပါတယ်, ထို့အပြင်၎င်းသည်လယ်သမားများကိုခြွေလှေ့စေသောအထောက်အကူလည်းဖြစ်သည်။ ဤပြောင်းဆန်ခြွေလှေ့နှုန်းမြင့်ပြီးကျိုးနှုန်းနိမ့်သောဤပြောင်းဆန်ခြွေစက်ကို, အရာကာလကိုတိုစေနိုင်သည်,နှင့်များစွာသောအလုပ်သမားကိုကယ်တင်နိုင်ပါ, ကျေးလက်ဒေသများတွင်ပြောင်းဆန်ခြွေလှေ့စက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, လွင်ပြင်, အလယ်အလတ်အဆင့်ခရိုင်, တောင်ကုန်းများ,အရာအသုံးပြုသူအများစုအားဖြင့်ကြိုဆိုသည်.
ဒီဇယ်ဆန်စက်ခြွေလှေ့စက်သည် axial စီးဆင်းမှုခြွေလှေ့သည့်ဘုံနှင့်ညှိနိုင်သောလေစီးဆင်းမှုသန့်ရှင်းရေးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်, စပါးကိုအပေါ်ခွဲခြာသန့်ရှင်းရေး, ဖွဲ, ချိုင့် abortive, ကောက်ရိုး, multuction စပါးခြွေလှေ့စက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲထားပါသည်, သေးငယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှု, အသားတင်အားသာချက်၏မြင့်မားသောနှုန်းသည်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောသီးနှံကြိတ်ခွဲအကြား, ဖန်သားပြင်အစားထိုးရိုးရှင်းစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်.
ဤပြောင်းဆန်ခြွေစက်ကိုအဓိကအားဖြင့် feed hopper ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, စည်, မျက်နှာပြင်ကွက်, စင်ပေါ်, အလုပ်မှာဒါ on.When, ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အစာကျွေးပါ, ကောက်ပဲသီးနှံများကိုပွတ်တိုက်အားဖြင့်ခြွေလှေ့လိမ့်မည်, ညှစ်, လေယာဉ်ပျက်ကျ, နှင့် roller ၏ထိန်သိမ်းနှင့်မျက်နှာပြင်၏ပေါင်းစပ်အစိတ်အပိုင်းများအကြားလှုပ်, စပါးပင်သည်အသီးမှ၎င်း၊, နှင့်မျက်နှာပြင်ကနေရိနာစွဲ, အညှာတစ်ချိန်တည်းမှာရိတ်ခြင်းခြွေလှေ့စက်၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့စည်၏ centrifugal function ကိုအားဖြင့်ထုတ်ထုတ်လိမ့်မည်.
Millet Thresher အလုပ်လုပ်သည့်ဗီဒီယို